Fitsipika 36 momba ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Fitsipika 36 an'ny haino aman-jery sosialy
Zoma 16 Novambra 2012 Zoma 16 Novambra 2012 Douglas Karr
Raha efa ela no namakianao ity bilaogy ity dia fantatrao fa mankahala fitsipika aho. Mbola tanora dia tanora tokoa ny media sosialy ka toa mbola tsy tonga aloha ny fampiharana lalàna. Ireo olona ao amin'ny FastCompany dia manangona amboaran-torohevitra vitsivitsy ary miantso azy ireo hoe Fitsipika momba ny haino aman-jery sosialy.
Ity infographic ity dia fanangonana ireo fitsipika navoaka tao amin'ny fanontana tamin'ny septambra an'ny magazine. Mbola tsy nantsoiko ireo fitsipika ireo satria nandika ny sasany tamin'izy ireo aho ary mbola nahazo valiny… saingy tena hatoro anao ho toy ny fanangonana torohevitra tsara hanatsarana ny ezaka ara-barotra eo amin'ny lafiny sosialy ianao.
FastCompany izao dia manangona ny toro-hevitrao. Ianao dia afaka apetraho amin'ny Internet izy ireo.
Tags: fastcompanyfitsipiky ny media sosialyhaino aman-jery sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialylalànan'ny media sosialytoro-hevitra amin'ny media sosialy
Atsaharo ny manafina ireo endrika manan-danja indrindra amin'ny fanatrehanao tranonkala
Top 10 Tsy maintsy manana fampiharana sary iPhone
30 Nov 2012 amin'ny 1:55 maraina
Indraindray tsy miraharaha ny lalàna aho fa amin'ny fomba iray dia hajaiko ny olona mankatò izany lalàna izany, fa amin'ny haino aman-jery sosialy dia mandefitra amin'ny lalàna aho dia manao izay rehetra tadiaviko nefa tsy mieritreritra ireo fitsipika.
Mar 4, 2013 amin'ny 11: 54 AM
Tsy miombon-kevitra amin'ireo antontan'isa ireo aho ary tsy mieritreritra akory ny momba ny media sosialy ny sasany.
Mar 5, 2013 amin'ny 10: 45 AM
Nifanaraka izahay @barryjfeldman: disqus!
Apr 11, 2013 ao amin'ny 5: PM PM
“… Mbola tanora dia tanora tokoa ny media sosialy ka toa mbola tsy tonga aloha ny lalàna mifehy.” Tsy vitan'ny hoe aloha loatra izy ireo - ny tena foto-kevitry ny haino aman-jery sosialy 'Fitsipika' dia mihomehy mihomehy! Nentina tamin'ireto tsaho rehetra tao amin'ny 'Fampiharana tsara indrindra' ara-tsosialy… Raha tsy hoe, manandrana mivarotra anao ny bokiko farany aho - raha izany dia tohizo foana!
Tena matotra - tena tsy misy andro na fotoana tsara indrindra handefasana amin'ny Twitter… .na zavatra hafa tsara indrindra hanaovana asa sosialy ho an'ny marika - ny marketing amin'ny sosialy dia misy miovaova be dia be izay mety hahatonga ny lohanao hieritreritra fotsiny momba azy ireo! Mahavariana ny sosialy… manahirana… manjary miboiboika miaraka amin'ny mety ho varotra - ary mety ho fandrika ho an'ireo mpivarotra manandrana manatsotra ny tena fiainana amin'izany!